Ungalibheka kanjani ibhethri le-AirTag yakho | iPhone News
Ungalibheka kanjani ibhethri le-AirTag yakho
UMiguel Hernandez | 03/05/2022 10:00 | I-HomeKit, iPhone, Imikhiqizo ye-Apple, Okokufundisa namanyuwali
Sekudlule isikhathi esingaphezu konyaka kwethulwa ngokusemthethweni i-AirTag futhi abanye abasebenzisi sebeqalile ukungabaza ukuzimela kwayo, ikakhulukazi uma kucatshangelwa ukuthi amabhethri ayo awashajwa kabusha. Kodwa-ke, ubude baleli bhethri yinde impela futhi akukhona lokho kuphela, singalubona kusengaphambili ushintsho kusenesikhathi.
Lena yindlela ongalibheka ngayo ibhethri elisele le-AirTag yakho futhi ufike ngaphambi kwakho ngokushintsha ibhethri ukuze izinto zakho zihlale zikhona. Kulula kakhulu, futhi njengenjwayelo, ku-iPhone News sizokutshela zonke izinyathelo ngendlela elula.
Okokuqala, kufanele kuqashelwe ukuthi i-Apple ayisinikezi indlela eqondile, okungukuthi, ngephesenti, ukwazi ukuthi i-AirTag yethu esele nebhethri engakanani. Kuzodingeka sithole isithombe esifana nalesi esitholakala ekhoneni eliphezulu kwesokudla se-iPhone yethu futhi ngokwengqondo senze isilinganiso sokubala. Ngokombono, ibhethri le-AirTag lihlala okungenani unyaka, nakuba lokhu kuzoncika kakhulu ekusetshenzisweni okunikezayo nokuthi uhlola kangakanani indawo yayo, esimweni sami, ngisenakho ukuzimela okuningi okusele ngemva konyaka. Ukuyihlola kulula njengalokhu:
Faka uhlelo lokusebenza Ukucinga kudivayisi yakho ye-Apple
Khetha Izinhloso bese kuba yi-AirTag ofuna ukuyihlola ibhethri layo
Lapho kuvulwa ulwazi oluthile lwe-AirTag, ibhethri liboniswa ekhoneni eliphezulu kwesokunxele, kwesokudla endaweni "yokudlala umsindo" nangaphansi kwegama.
Lokho kulula uzokwazi ukuhlola ukuzimela kwe-AirTag yakho. Uma kufanele uyishintshe, ungabheka ividiyo yethu lapho esikubonisa khona isinyathelo ngesinyathelo, kodwa into yokuqala ozoyidinga ibhethri. CR2032 ongayithenga kalula ku-Amazon noma indawo yakho evamile yokuthengisa. Lawa mabhethri (noma amaseli) abiza ngaphezudlwana nje kwe-euro eyodwa ngeyunithi ngayinye, nakuba ngokuvamile eza ngamaphakheji.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Imikhiqizo ye-Apple » I-HomeKit » Ungalibheka kanjani ibhethri le-AirTag yakho
I-WhatsApp izokuvumela maduze ukuthi ubone izimo ezivela kuthreyi lengxoxo